Miisa 239 ireo nifindran’ny valanaretina : namono olona enina tao anatin’ny 72 ora ny covid-19 | NewsMada
Miisa 239 ireo nifindran’ny valanaretina : namono olona enina tao anatin’ny 72 ora ny covid-19
Par Taratra sur 11/09/2020
Mandrimandry manana aretina…? Tena mbola anatin’ny ady isika izao raha miainga amin’ny antontanisa tao anatin’ny andro vitsy. Niakatra tampoka ny isan’ireo lavo ary nihazakazaka ny fifindran’ny valanaretina.
Efatra ireo maty, ny 8 septambra teo. Niampy iray avy tany Matsiatra Ambony sy tany Diana izany, omaly ka tafakatra enina ireo lavon’ny covid-19 tao anatin’ny telo andro. Mbola mamahatra any avaratry ny Nosy ny valanaretina fa avy any avokoa ny efatra amin’ireo enina lavo ireo. Na izany aza, mbola lohalaharana hatrany amin’ny fihanaky ny coronavirus ny eto Analamanga. Tafakatra 208 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty.
Nirongatra tsikelikely tao anatin’ny telo andro
Etsy an-daniny, mirongatra indray koa ny fifindran’ny coronavirus tao anatin’ny telo andro farany. Miisa 50 izany ny 8 septambra. Niakatra ho 85 afakomaly ary tonga hatrany amin’ny104 ireo tranga vaovao, omaly. Avy eto Analamanga ny 53 amin’ireo nifindran’ny valanaretina maherin’ny 100 ireo. Samy 20 avy kosa ny any Vakinankaratra sy ny any Diana. Enina ny any Sava raha efatra ny tranga vaovao ao Amoron’i Mania ary iray kosa ny any Sofia.
Niampy 48 ka tafakatra 1 119 ireo mbola any amin’ny hopitaly
Ankoatra izany, miisa 48 ireo marary mafy ka mitsinjara ho 19 etsy Befelatanana raha efatra eny amin’ny HJRA ary telo eny Andohatapenaka. Iray avy kosa ny “forme grave” eny Anosiala sy ny CMC Mahamasina.Manampy ireo ny any Fianarantsoa, miisa 12 raha samy telo avy ny ao Antsirabe sy Diana ary iray kosa ny marary mafy any Toliara.
Na izany aza, miisa 52 ireo sitrana ka avy any Menabe ny 20 amin’izany. Tafakatra 14 295 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo nitondra ny tsimokaretina miisa 15 624. Mitombo hatrany koa anefa ny isan’ireo mbola tsaboina. Niampy 48 izany ka niakatra ho 1 119 ireo mbola tsaboina sy arahi-maso any amin’ny hopitaly ny fahasalamany.
Miisa 62 826 ireo fitiliana PCR vita raha 6 585 kosa izany ho an’ny fitiliana Genexpert.